मोबाइल भाइब्रेसनले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ ? | Himal Times
Home Flash News मोबाइल भाइब्रेसनले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ ?
मोबाइल फोनको अधकि प्रयोग स्वास्थ्यका लागी घातक मानन्छि । धेरै मोबाइल चलाउँदा टाउको दुख्ने आँखा दुख्ने जस्ता समस्या पन देखन्छिन । अझ मोबाइलको भाइब्रेसनले स्वास्थ्यमा नपुंशक हुने, क्यान्सर हुने भन्नेजस्ता हल्ला पनि चलेका सुनन्छिन ।
तर के वास्तवकिता त्यस्तै हो त रु फोनको रेडयिसनसँग नजकि हुदाँ यसले क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगको खतरा उत्पन्न गराउँछ गराउन्न भन्नेबारे मत वभिाजति छ । घातक भन्ने बत्तिकिै मानसिहरुमा ॅरेडयिसन’ प्रती त्रासको भाव पैदा हुने गरेको छ । केही रेडयिसनले कोशकिा तथा डीएनएलाई क्षती पुर्‍याउँछ । जसले क्यान्सरको खतरा समेत नम्त्यिाउँने वशिेषज्ञहरु बताउँछन ।
रेडयिसन के हो ?
रेडयिसन भनेको वरपिरीको वातावरणमा उत्सर्जन भएका ऊर्जा तरंगहरु हुन् ।
मोबाइल फोनको हकमा रेडयिसनको कुरा गर्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटकि रेडयिसन’ भन्ने बुझन्छि ।
यसरी हेर्दा क्यान्सर उत्पन्न गराउने अल्ट्रा भायोलेट अर्थात् युभी रेडयिसन पनी इलेक्ट्रोम्याग्नेटकि रेडयिसन नै हो ।
यसकारण पनी धेरै मानसिहरु मोबाइल फोनको रेडयिसनलाई क्यान्सरसँग जोडेर हेर्ने गरएिको छ ।
घामबाट आउने अल्ट्रा भायोलेट करिणले जब छालालाई छेडेर डीएनए रहेको सेलभत्रिको स्थानमा पुग्छ तब क्यान्सर उत्पन्न गराउँछ ।
समयसँगै यसले डीएनएमा असर गर्छ र कोशीका नै प्रभावति बन्छ । शरीरमा नयाँ कोशकिा उत्पादन गर्न डीएनएको वशिेष भूमकिा हुन्छ ।
तर डीएनएमा नै क्षती पुगेपछी नयाँ बन्ने कोशकिा पनी दुषति हुन्छन् । यसरी दुषति कोशहरु बढ्दै गएपछि यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या नम्त्यिाउँछ ।
तर हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने मोबाइलफोनबाट उत्सर्जन हुने युभी रेज फरक हो ।
एक्स रे, युभी रेज तथा वभिन्नि कसिमिका हानकिारक रेडयिसनलाई आयोनाइज गरएिको हुन्छ । मोबाइल फोन तथा डेस्क ल्याम्पहरुमा प्रयोग हुने रेडयिसनलाई आयोनाइज गरीएको हुँदैन ।
यसकारण अधकिांश वैज्ञानकि तथा वज्ञिहरु मोबाइलबाट उत्सर्जन हुने रेडयिसन घरको रेडियटर जस्तो हुने र यससँग डराउनु नपर्ने बताउँछन् ।
यसर्थ मोबाइलको भाइब्रेसनकै कारण क्यान्सर र मानसिको मृत्यु जस्ता विषय अतरिञ्जनापूर्ण भएको वज्ञिहरु बताउँछन । ईदेउरालीबाट
Previous articleतत्वज्ञान: कुमार काफ्ले
Next articleलकडाउनको मोडालिटीबारे कार्ययोजना तयार गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मा